RUBRIQUE: POLITIKA : 19 mars 2018
Efa tsy takona afenina intsony ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanaparam-pahefana ataon’ireo olom-boafidy izay mihevitra ho tompon’ny fahefana rehetra eo am-pelatanany.
Mbola miteraka resabe hatreto ny mahakasika ilay volavolan- dalàna fehizoro natao hifehy ny fifidianana amin’ity taona 2018 ity.
Mitombo isa hatrany ireo olona milaza ny fahavononany hanarina sy hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao aminy.
Nilaza ny fahavononany tanteraka amin’ny fampandrosoana ny firenena ny antoko Mfm. Hoporofoin’ireo mpikambana izany amin’ny alalan’ny fandraisana anjara amin’ireo karazam-pifidianana misy eto amin’ny firenena.
Herintaona mahery aty aorian’ilay fihetsika feno habibiana niseho tany Antsakabary, Distrikan’i Befandriana Avaratra dia mbola azo lazaina ho very an-javony ihany ny fanadihadiana izay nolazain’ireo tompon’andraikitra fa hatao.
Nahazo fandrahonana ny orinasa mpanamboatra lalana any Ambilobe MARARY FO NY HVM (561) 15 mars 2018 Noroahina hivoaka ny lapa ny mpanao gazety, raikitra ny ady saritaka FANDINIHANA LALAM-PIFIDIANANA TENY TSIMBAZAZA (365) 14 mars 2018 Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra FANAMBANIANA MPANAO GAZETY (344) 15 mars 2018 “Hampidinina ho amin’ny antsasany ny vidin-jiro” ANDRY RAJOELINA SY NY IEM (283) 13 mars 2018